အရေပြားကျန်းမာစေဖို့ မဖြစ်မနေလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်အချို့ - Hello Sayarwon
အသားအရေနှင့် အလှအပ » အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်း
အရေပြားကျန်းမာစေဖို့ မဖြစ်မနေလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်အချို့
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win | ရေးသားသူ Aye Thi Mon
ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သလို ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ခံတပ်ဆိုလည်း ဟုတ်တဲ့အရေပြားကျန်းမာမှ ခန္ဓါကိုယ်လည်း လှပကျန်းမာမှာအသေအချာပါနော်။ ဒီလောက်ညွှန်းနေရအောင် အရေပြားက ဘာများလုပ်ပေးနေလို့လဲလို့ဆိုပြီး အတွေးဖြစ်မိနေရင် ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
ခန္ဓါကိုယ်ကိုနေရာလပ်မကျန်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အပေါ်ယံအရေပြားလွှာက ခန္ဓါကိုယ်ကို အခုလိုစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။
ကိုယ်တွင်းကို ရောဂါပိုးတွေ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ခံတပ်သဖွယ်ကာကွယ်ပေးတယ်
နေရောင်ခြည်မှာပါတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးတယ်
ပတ်ဝန်းကျင်က အရာတွေကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်မထိခိုက်ရအောင် ကာကွယ်ပေးတယ်
လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကို စုပ်ယူပေးပြီး ဆဲလ်တွေ ကျန်းမာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးတယ်
အရေပြားကျန်းမာစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးတယ်
ဗီတာမင် D လိုမျိုး လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေရရှိအောင် စုပ်ယူပေးပြီး ဆဲလ်တွေကို အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်၊ ကျန်းမာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးတယ်
အရေပြားကျန်းမာဖို့ မဖြစ်မနေလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်အချို့
ခန္ဓါကိုယ်အတွက် အရေးပါတဲ့ ခံတပ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို မဖြစ်မနေလိုက်နာသင့်ပါတယ်။
နေရောင်ခြည်က ဗီတာမင် D ကိုပေးစွမ်းပေမယ့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပါဝင်မှုကြောင့် အသားအရေကို ထိခိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။နေရောင်ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုက အရေးအကြောင်းတွေ၊ အမဲစက်တွေနဲ့ အရေပြားကင်ဆာအပါအဝင် အရေပြားပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေစဉ်နေလောင်ကာခရင်မ်လူးပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ အပြင်သွားတိုင်း အင်္ကျီလက်ရှည်ဝတ်တာ၊ ထီးဆောင်းတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။
ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုက အသားအရေကိုတော်တော်လေးထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သလို အရေးအကြောင်းတွေ နဲ့ အခြားသော အရေပြားပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေရရှိမှုနဲ့သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကိုလည်း အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရေချိုးပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ဆေးပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ခြေထောက်ဆေးပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ်ရေခြောက်အောင်သုတ်ပေးပါ။ရေခြောက်အောင် မသုတ်တာက အရေပြားကို အစိုဓါတ်လျော့စေပြီး အသားအရေခြောက်သွေ့နိုင်ခြေ ပိုများစေနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားကို အစိုဓါတ်ထိန်းတာကလည်း ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်အရေပြားကို အစိုဓါတ်ထိန်းပေးတဲ့ ခရင်မ်တစ်ခုခုလူးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
အသားအရေကျန်းမာစေဖို့အတွက် သစ်သီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစားပေးပါ။ အဆီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အသားတွေ စားပေးပါ။ အဆီပါဝင်မှုများတဲ့ ပင်လယ်ငါးတွေစားပေးပါ။ရေများများသောက်ပေးပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းတာက အသားအရေကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို ဝက်ခြံတွေ၊ အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေပြားကျန်းမာစေဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ိုပါမယ်။ ဒါကြောင့် သီချင်းနားထောင်တာ၊ တရားထိုင်တာ နဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလုပ်လို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးပါ။
Skin care:5tips for healthy skinhttps://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/skin-care/art-20048237 Accessed Date 31 July 2019
5 reasons you should take care of your skinhttps://www.onlymyhealth.com/why-skin-important-1298015619Accessed Date 31 July 2019
အရေပြားနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ရန်သူတော် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်
အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်အသေတွေ ဖယ်ရှားခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး
ဘေဘီလေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ဖရဲသီး စကျွေးမလဲ ...... ဘေဘီလေးက အသက် ၆ လပြည့်ပြီးပြီဆိုရင် ဘေဘီလေးကို ဖရဲသီး စကျွေးလို့ ရပါပြီ။
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း စက်တင်ဘာ 13, 2021 .2mins read
နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အလေ့အထများက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ။ နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အလေ့အထများ ကတော့ ....
နှလုံးနှင့်သွေးကြော ကျန်းမာရေး, နှလုံးရောဂါ စက်တင်ဘာ 10, 2021 .2mins read
မနက်ခင်းကို သီချင်းလေးတွေ နဲ့ နိုးထပါ ....... သီချင်းနားထောင်တာက စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေး, စိတ်ဖိစီးမှုဖြေလျှော့ခြင်း စက်တင်ဘာ 3, 2021 .2mins read
ကျဆင်းလာတဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည် ကို ပြန်လည် မြှင့်တင်ရအောင် ဘာတွေကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲဖတ်ရအောင်လား..............
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စက်တင်ဘာ 2, 2021 .2mins read
အစားအစာတွေကို အေးခဲတာက အာဟာရတန်ဖိုး ပျက်စေသလား………
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 27, 2021 .2mins read
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးတဲ့အခါ side effect ခံစားရခြင်း၊ မခံစားရခြင်းဆိုတာ
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 23, 2021 .2mins read